San Htun's Diary: December 2013
အလုပ်အသစ်၊ အိမ်အသစ်၊ မြို့ အသစ်၊ လူအသစ်တွေနဲ့ဘီးစီးနေလိုက်တာ ဘလော့ကိုတောင် ပစ်ထားတာ အတော်ကြာပြီ။ မနက် ၈ နာရီ အိမ်က ထွက်သွားလိုက်တာ ည ၈ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ အလုပ်ထဲမှာလည်း ဘီးစီးတာများ ဂျီးမေးလ်ဖွင့်ထားတယ် ဆိုရုံပဲ။ ဖေ့ဘွတ်၊ ရာဟူး၊ သတင်းတွေ ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိ။ ထမင်းချက်ဖို့အချိန်မရှိ။ မနက်စာ၊ ညစာ အပြင်မှာ ဝယ်စားရတယ်။ အိမ်ဘေးနားက ကားလမ်းမကြီးက ဆူညံနေလို့အိပ်မပျော်ဘူး။ အပေါ်ထပ်က ဒုန်းဒုန်း ခေါင်းကြိမ်းတယ်။ ညဖက်ဆို ဆိုဒ်မှာကြေငြာထားတဲ့ အခန်းတွေကြည့် အီးမေးလ်ပို့ ။ ပိတ်ရက်တွေမှာ အခန်းလိုက်ကြည့်။ ကန်တက်ကီနဲ့မေရီလန်း Town House အိမ်တွေက ကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာပါတဲ့ အခန်းကျယ်ကျယ်မှာ နေခဲ့တော့ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ရှယ်သုံး၊ အပေါ်ထပ်၊ အောက်ထပ်၊ ဘေးထပ် အထပ်ပေါင်းစုံက အသံတွေ ကြားရ၊ ကားသံတွေ ဆူညံနေတဲ့ မြို့ ပြဘဝကို အသားကျဖို့အချိန်ယူနေရတယ်။
ဈေးကြီးလို့ယူရင်ကောင်းမလား၊ မကောင်းဘူးလား လားတွေများနေတုန်း သူများကယူသွားနှင့်ပြီ၊ ဈေးသက်သာတဲ့ အခန်းတွေကို မကြိုက်၊ အခန်းကြိုက်ပေမဲ့ လူကိုမကြိုက်။ အလုပ်ထဲမှာ ပင်ပန်းတော့ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ် စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့အနားယူလို့ ရမယ့် အိမ်လေး လိုချင်မိတယ်။ တောသားမြို့ တက် ပန်းသီးမြို့ ကြီးမှာ ကြုံရဆုံရသမျှ ဘလော့မှာ ရေးချင်ပေမဲ့ အချိန်မပေးနိုင်။ ရုံးနဲ့ တစ်ဘလော့အဝေးက အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အဦး၊ တိုင်းစကွဲယား၊ ဂရမ်းစင်ထရယ်၊ ချိုင်စန်လာအဆောက်အဦး၊ ဘရိုင်ရန်ပန်းခြံတို့ ကို နေ့ စဉ်ဖြတ်နေပေမဲ့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်။ Fifth Ave ( စင်္ကာပူက အော့ချက်လမ်းမလို) တလျှောက်က ဘရန်းဆိုင်တွေရှေ့ဖြတ်နေပေမဲ့ လျှော့ပင်းမထွက်ဖြစ်။ စိတ်ကြိုက်အိမ်တွေ့ လို့နေသားတကျဖြစ်သွားရင်တော့ ပန်းသီးမြို့ က အတွေ့ အကြုံတွေကို ရေးချင်ပါသေးတယ်။ All About NYC စီးရီးပို့ စ်တွေ ဖတ်ချင်နေကြတဲ့သူတွေကို အားနာပါတယ်။ လာတော့လာမယ် ကြာမယ်လို့း) ။
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ဖြစ်ပါစေ။
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃။
ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ်ကူးကာလတွင် တစ်ယောက်တည်း ငေါင်နေရမည်မှာ စိတ်မကောင်းစရာကြီး သူတို့ ဆီလာလည်ရန် ဆူနမ်တို့ က ဖိတ်ခေါ်သောအခါ ခွင့် ၃ ရက် ယူရုံမျှနှင့် အားလပ်ရက် ၁၁ ရက် ရသောကြောင့် ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာတွင် ဆူနမ်တို့ ဆီ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ အေးလျှင် ခြေထောက်တွင် အနီကွက်ထ၊ ယားသော အအေးအလာဂျီရှိသည့် ရာမားကြောင့် ဘယ်မှမသွား အိမ်တွင်သာနေမည်ဟု စကားပလ္လင်ခံထားသည်။ ၂၀၁၂ ဂျူလှိုင် ရာမားရှိရာ ဘော့စတွန်သို့သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ဟိုသွားချင်သည်၊ ဒီသွားချင်သည်ဟု နားပူနားဆာ ဂျီကျသူတစ်ယောက်အကြောင်း သူတို့ ကောင်းကောင်း သိကြသည်။
နေ့ လည် အိမ်အနီးရှိ ဘူတာရုံတွင် ကားထားခဲ့ပြီး ရထားလက်မှတ်ဝယ်သောအခါ အိမ်ဖြူတော်ကို သွားချင်လို့ဘယ်ဘူတာတွင် ဆင်းရမလဲဟု မေးသောအခါ မတ်ထရိုဘူတာ။ ဘယ်ဖက်ကိုသွားတဲ့ ရထားစီးရမလဲဟု မေးသောအခါ ဒီဘူတာက ဂိတ်ဆုံး။ ဘယ်ရထားစီးစီး အားလုံး ဒီစီမြို့ ထဲကိုသွားတာ။ မတ်ထရိုစင်တာဘူတာမှ တက်လိုက်သည်နှင့် အအေးဓာတ်က ကျင်တက်လာသောကြောင့် ဦးထုပ်၊ လက်အိတ် ထုတ်ဝတ်ရသည်။ ဘူတာရုံဝန်ထမ်း ညွှန်လိုက်သည့်အတိုင်း တည့်တည့်လျှောက် အဆုံးမှာဘယ်ကွေ့ ။ ရာမားကြောင့် ခဏနားရပြန်သည်။ လူတွေတရုန်းရုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသည့် ရုပ်တုကိုကျော်ဖြတ်သောအခါ ကွင်းပြင်ကျယ်ဆီသို့ရောက်သည်။
ဟိုခြံစည်းရိုးနားမှာ လူတွေတရုန်းရုန်း ဘာလုပ်နေတာလဲ။ အဲဒါ အိမ်ဖြူတော်ဟု ဆိုသောအခါ ကာရံထားသည့် တံတိုင်းများကြောင့် တပတ်ကြီးပြန်လျှောက် ရဲကားတစ်စီး အမြဲရပ်ထားကာ လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်နေသည့် ခြံစည်းရိုးရှေ့ တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြသူများ၊ ခြံစည်းရိုးတိုင်ကြား ကင်မရာထည့် အနီးကပ်ဆွဲကာ ရိုက်နေသူများ အုန်းအုန်းထနေသည့်ကြား မရရအောင် ဝင်အုန်းခဲ့သည်။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် အများကြီးရှိသည့် ပွဲတော်ကိုတော့ ဝင်မတိုးတော့။ ထို့ နောက် မိုးနှုးမတ်ကျောက်တိုင်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ အိမ်ဖြူတော်လည်း မကြိုက်ဘူး၊ ကယ်ပီတယ်လည်း မကြိုက်ဘူး ဒီစီတွင် သူ အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည့် ရေပန်းကလေးများဖြင့် သာယာလှပသည့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့ဆူနမ်က ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရောင်စုံထွန်းလင်းနေသည့် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ရှိသည့် ကယ်ပီတယ်သို့သွားချင်သောကြောင့် နင်တို့ ဒီမှာစောင့် ငါ ဓာတ်ပုံသွားရိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့မည်ဆိုသည်ကို ဆူနမ်တို့ က စိတ်မချ။ ရာမားက လမ်းတွင်နှစ်ခေါက်လောက် နားရပြီး ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အား ဓာတ်ပုံရိုက်သော်လည်း မှောင်မည်းနေသည်။ ကိုင်း နင် ရောက်ချင်တာရောက်ပြီ ဘူတာရုံရှာဟု ဆိုသောအခါ မှောင်နေပြီမို့မမြင်ရ။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာများကို မေးကြည့်သောအခါ ဟိုဖက်မှာဟု ဆိုသော်ငြား မတွေ့ ရ။ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လျှောက်သောအခါ မီးရောင်စုံထွန်းညှိထားသည်မှာ လှပသောကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ နောက်တော့မှသိသည် ၎င်းသည် ယူနိုက်တက်စတိတ် ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းဖြစ်သည်။ ဖြတ်သွားသည့် တရုတ်အုပ်စုကို မေးမြန်းသည့်အခါ အနီးဆုံးဘူတာရုံကို နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ လောက် လျှောက်ဖို့ လိုသေးတယ်ဟု အားတက်ဖွယ်ရာ ကြားလိုက်ရလေသည်။
ရာသီဥတုက အေးစိမ့်ကာ ညောင်းညာလွန်းသည်မို့ဘတ်စ်ကားဂိတ်၊ တက္ကစီဂိတ် မည်သည့်အရာမှန်းမသိ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားသည့် မှတ်တိုင်တွင် စောင့်နေတုန်း ဘတ်စ်ကားတစ်စီး လာရပ်သောကြောင့် ဝမ်းသာအားရ ခုန်တက်ကြသည်။ အနီးဆုံး ဘူတာရုံကိုသာ ချပေးပါ၊ ဘယ်လောက်ကျသလဲဟု မေးသောအခါ မပေးပါနှင့်ဟု ဆိုသည်။ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးလုံး ကိုယ်တို့ သုံးယောက်တည်း။ ဓားထောက်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းလျှင် ပေးဖို့ ပိုက်ဆံအကြွေ ဆောင်ထားရသည်ဟု ကြားဖူးသောကြောင့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက် ဘယ်နေရာမှန်းမသိသည့် နေရာများကို ကြည့်လိုက် ကြောက်စိတ်ဖြင့် ငြိမ်သက်နေကြသည်။ အဲဒီမှာ မတ်ထရိုဘူတာ လမ်းကူးလိုက်ရင် ရောက်ပြီဟု အသေအချာ လမ်းညွှန်သွားကာ ဘတ်စ်ကားခမယူသည့် အနှီဒရိုင်ဘာကို ကျေးဇူးတင်မဆုံး။
ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနေသည့် ဆူနမ်တို့ ကို စတားဘာ့ခ်ကော်ဖီတိုက်ပြီး ချော့ဖို့ စိတ်ကူးသောအခါ ဆယ်မိနစ်အတွင်း ဆိုင်ပိတ်တော့မည်။ ကော်ဖီပူပူလေး တကျိုက်သောက်၊ ကိတ်မုန့် လေး တဖဲ့ကိုက်ကာ ပင်ပန်းလိုက်တာဟု ညည်းညူကြသည်။ မတ်ထရိုစင်တာဘူတာတွင် လူရှင်းသည့် ရထားတံခါးပေါက်ဆီ ပြေးကြရင်း ဝင်တော့မည်ဟန် ပြင်တော့မှ Step Back. Door is closing. ဆိုကာ မောင်းထွက်သွားလေအခါ ရှက်ရယ် ရယ်လိုက်ကြသည်မှာ တော်တော်နှင့်မရပ်။ ဂိတ်ဆုံးအထိ စီးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချလက်ချ အိပ်ငိုက်ကြသည်။ ပင်ပန်းလိုက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။ တကိုယ်လုံးကိုက်ခဲ ပင်ပန်းကြသော်ငြား ဆူနမ်တို့ က ကွန်ပလိမ်းမတက်။ ထိုသို့ ဖြင့် ၂၀၁၂ ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့ တွင် ထိုမြို့ လေးသို့စတင်ရောက်ဖူးခဲ့သည်။
အိမ်မှ ဘူတာရုံအထိ ဘတ်စ်ကားစီး၊ ရထားက မြို့ လယ်ခေါင်ဆီရောက်ပြီး၊ လည်ပတ်စရာ အားလုံးနီးပါးကလည်း မြို့ လယ်ခေါင်တွင် ရှိသောကြောင့် နှင်းမကျသည့်နေ့ များတွင် တစ်ယောက်တည်း တိုးရစ်မည်ကို ဆူနမ်က ခွင့်ပြုသည်။ သို့ သော် ညမမှောင်ခင် အိမ်အရောက် ပြန်လာရမည်။ ဒူးပွိုင့်စာကယ် ဘူတာတွင်ဆင်းပြီး ဘတ်စ်ကားစီးကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဋ္ဌမမြောက်အကြီးဆုံး၊ အမေရိကန်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော ဝါရှင်တန်နေရှင်နယ် ကသီဒရယ်ဆီ သွားရောက်လည်ပတ်သည်။ ထုထည်ကြီးမား ခန့် ညားလှသလို အတွင်းဖက်ရှိ အနုပညာလက်ရာများမှာ အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ အထူးခြားဆုံးမှာ အမေရိကန်သမိုင်း၊ ခရစ်ယာန်သမိုင်းကို ဖော်ကျူးထားသည့် ရောင်စုံပြိုးပျက် လက်ရာမြောက်လှသည့် ပြတင်းပေါက်များဖြစ်သည်။
ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်တွင် ဝါရှင်တန်ကို သွားလည်မည်ဟု ဆိုသောအခါ အရှေ့ ဖက်ခြမ်းက ဝါရှင်တန်မြို့ တော်လား၊ အနောက်ဖက်ခြမ်းက ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကိုလားဟု မေးကြသည်။ District of Columbia ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ဝါရှင်တန်မြို့ တော်ကို ကွဲပြားအောင် ဝါရှင်တန်ဒီစီဟု ခေါ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အမိုးခုံးခုံးဖြူဖြူအိမ်ဖြူတော်ကို သွားလည်မည်ဟု ဆိုသောအခါ ရုရှားတွင်နေထိုင်ဖူးပြီး ရုရှားမကို လက်ထပ်ထားသည့် ဆူပါဗုိုက်ဆာဂျရတ်က နိုင်ငံခြားသားများ အိမ်ဖြူတော်နှင့် ကယ်ပီတယ် မကွဲသည်ကို သိနေသည့်အလား အမိုးခုံးဖြူဖြူဆိုတာ ဆီးနိတ်နှင့်ဟောက်စ် လွှတ်တော်များရှိပြီး အမတ်များ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေး ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းသည့် ကယ်ပီတယ်၊ လက်ရှိသမ္မတနေထိုင်သည့် အိမ်ဖြူတော်ကို ကွဲပြားအောင် ဂူဂယ်ဓာတ်ပုံများဖြင့် ရှင်းပြရှာသည်။
ကယ်ပီတယ်သည် လုံခြုံရေး အတော်တင်းကျပ်သည်။ နာရီဝက်ခန့်တန်းစီးစောင့်ဆိုင်းရပြီး ရေဘူး၊ အစားအသောက် အကုန်လွှင့်ပစ်သည်။ အထဲရောက်သောအခါလည်း နာရီဝက်ခန့်တန်းစီရပြန်သည်။ ကယ်ပီတယ်တိုးဂိုက်မှ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပြီး ပြည်နယ်တခုခြင်းစီမှ ထင်ရှားသူများ၏ ရုပ်တုများ၊ ရောင်တန်နာမှ ထူးခြားသည့် ပန်းချီလက်ရာများ၊ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်း ဖော်ကျူးထားသော ကြီးမားသည့် ပန်းချီကားချပ်များကြောင့် ထိုမျှစောင့်ဆိုင်း တန်းစီရသော်လည်း တန်ပေသည်။
လိုင်ဘရီအော့ဖ်ကွန်ကရက် စာကြည့်တိုက်သည် ရှားပါးစာအုပ်မျိုးစုံ သန်းချီစုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားသည့် နိုင်ငံ၏အဖိုးတန် ရတနာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ရှားပါးပစ္စည်းပြခန်း၊ ပြည်တွင်းစစ်ပြခန်း၊ မာယာလူမျိုးစု ယဉ်ကျေးမှုပြခန်းတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပြု။ သုတေသနပြုသူများအတွက်သာ စာဖတ်ခွင့်ပြုသည်။ မဟော်ဂနီရောင် တောက်နေသော စာအုပ်စင်တွင် အနက်ရောင်၊ အနီရောင် ကထ္ထူဖုံးထားသော စာအုပ်များကို အစီအရီ တင်ထားသည်မှာ ခန့် ညားလှသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြီးကျယ်ခမ်းနား လှပသော စာကြည့်တိုက်တွင် တစ်ခေါက်လောက် စာထိုင်ဖတ်ချင်စမ်းပါဘိ။
ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့ပထမဆုံးလာရောက်စဉ်တုန်းက တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေစဉ် မီးများထွန်းညှိထားသည်မှာ လှပသောကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည့်နေရာမှာ ယူနိုက်တက်စ်စတိတ် ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းဖြစ်သည်။ တန်းစီနေသည့်လူတန်းကြီးမှာ အရှည်ကြီး ယမန်နှစ်က မိနစ်လေးဆယ်ခန့် တန်းစီခဲ့ရသည်ဟု နောက်တွင်တန်းစီနေသည့် မိသားစုမှ အားတက်ဖွယ်စကားဆိုသည်။ သို့ သော် ယခု သိပ်မကြာ။ ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းတွင် တကမ္ဘာလုံးမှ အပင်များကို စုဆောင်းစိုက်ပျိုးထားသည်။ သစ်ခွဥယျာဉ်သည် အတော်စုံလင်လှသည်။ ယူအက်စ်ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူဘော်တနစ်ဂါးဒင်းသည် အခမဲ့မဟုတ်။ အမျိုးသားအာကာသပြတိုက်သည် လကမ္ဘာသို့လူသားတို့စတင်ခြေချနိုင်သည်မှစ၍ အင်္ဂါဂြိုလ်သို့စူးစမ်းလေ့လာနေမှုများ၊ လေယာဉ်ပျံ၏သမိုင်းများဖြင့် အထက်ကောင်းကင် အာကာယံမှ မသိသေးသည့် အကြောင်းအရာများ၊ စကြာဝဋ္ဌာတွင် အသစ်လေ့လာတွေ့ ရှိမှုများဖြင့် ကြယ်တာရာကို စိတ်ဝင်စားသူများဖြင့် စည်ကားလှသည်။
အာလင်တန် စစ်သင်္ချိုင်းတွင် ခရော့စ်အုတ်ဂူဖြူဖြူများကို မြင်ရသည်မှာ ကြေကွဲစရာ။ တစ်နာရီလျှင် တစ်ကြိမ် အမည်မသိကျဆုံးလေသူများနေရာတွင် အစောင့်လဲသည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဟု ဆူပါဗိုက်ဆာဂျရတ်က ဆိုသောကြောင့် အမှီသုတ်ခြေတင်သည်။ လမ်းလျှောက်လိုက်၊ သေနတ်တဖြောင်းဖြောင်းလှည့်လိုက်ဖြင့် စနစ်တကျ တာဝန်လွဲပြောင်းယူသည်။ ထိုအချိန် အားလုံးငြိမ်သက် မတ်တပ်ရပ်ပေးရသည်။ သမ္မတဂျွှန်အက်ဖ်ကနေဒီ အုတ်ဂူရှိသည်။ တောင်ကုန်းပေါ်မှကြည့်လျှင် ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသော ပတ်တိုးမတ်မြစ်၊ မိုးနှုးမတ်ကျောက်တိုင်၊ ကယ်ပီတယ်နှင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ တော်ကို စီးမိုးမြင်ရသည်။
စမစ်ဆိုးနီးယန်းပြတိုက်တွင် ရှားပါးပစ္စည်းများ၊ သမ္မတကတော် ဂျက်ကလင်းကနေဒီ၏ ပုလဲဆွဲကြိုး တွေ့ ရသည်။ စမစ်ဆိုးနီးယန်းပြတိုက်သည် အနီရောင်ရဲတိုက်ကြီးအလား ခန့် ညားလှပသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ အမျိုးသားသဘာဝပြတိုက်တွင် လူစည်ကားလှသည်။ ကမ္ဘာတလွှားမှ တိရစ္ဆာန်များကို ပုံစုံတူရုပ်တုများကို နေထိုင်ကျက်စားတတ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပါ ပြသထားသည်မှာ တောနက်ထဲ ကျက်စားနေထိုင်ကြပုံများကို တထိုင်တည်းနှင့် သိလိုက်ရသည်။ National Geographic ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှ ဆုရဓာတ်ပုံများကို ပြသထားသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာပြခန်းတွင် မြန်မာပြည်ထွက် ပတ္တမြား၊ နီလာကို တွေ့ ခဲ့သည်။ လိပ်ပြာပြခန်းတွင် မကြောက်မလန့်အေးချမ်းစွာ ပျံသန်းနေကြသည့် ရောင်စုံလိပ်ပြာလေးများကို မြင်ရသည်မှာ ဝင်ကြေးပေးရသော်လည်း တန်သည်။
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်၊ ဂျင်ဂဲဘဲလ် မရှိသော်ငြား ထိုခရစ်စမတ်သည် ကမ္ဘာသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိသည့်အလား တကယ့်ကို ထူးခြားတက်ကြွ ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်။ ပထမဆုံး တစ်ယောက်တည်း တိုးရစ်ခြင်းဖြစ်သလို တော်တော်လည်း တိုးရစ်နိုင်သည်ဟု သဘောပေါက်သွားခဲ့သည်။ ဆူနမ်တို့ သာပါလျှင် ပြတိုက်တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် တိုးရစ်နို်င်မည်မထင်။ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ အိမ်ပြန်လာသင့်ပြီဟု ဆူနမ် ဖုန်းလှမ်းဆက် သတိပေးတတ်သည့် နေဝင်ချိန်တွင် ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း၊ မောပန်းခြင်းများဖြင့် ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်ငိုက်အနားယူနေတတ်သည်။ တိုးရစ်ကောင်းသည်မှာ တခါတရံ နေ့ လည်စာကို အတော်နောက်ကျပြီးမှ စားရသော်လည်း ပင်ပန်းသည်မထင်။ ထိုမြို့ လေး၏ ရတနာများကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက ထိုမြို့ လေးတွင် အလုပ်ရလိမ့်မည်ဟု စိတ်ကူးတောင် မယဉ်ခဲ့။ အားလပ်ရပ်များတွင် လာရောက်လည်ပတ်သင့်သော မြို့ လေးတစ်မြို့ ဟုသာ တွေးခဲ့ သည်။
ကန်တက်ကီတွင် လေးအော့ဖ်ဖြစ်ပြီး ဆူနမ်တို့ ရှိရာ မေရီလန်းသို့ပြောင်းလာသည့် တစ်လခွဲအတွင်း ဖေ့တူဖေ့အင်တာဗျူး သုံးခုရသည်။ ကိုလံဘီယာ၊ ဖရက်ဒရစ်နှင့် ထိုမြို့ လေး။ အင်တာဗျူး လာဖြေသည့်အချိန်ကတည်းက အမိုးခုံးဖြူဖြူကယ်ပီတယ်ဘေးနားက ထိုရုံးလေးကို သဘောကျနေခဲ့သည်။ ။ အင်တာဗျူးသူကလည်း မျက်လုံးအလွန်လှသူတစ်ယောက်။ အစိုးရရုံးများ အများကြီး ရှိသောကြောင့် ရုံးဝတ်စုံအပြည့် ဝတ်ဆင်ထားသူများ မြင်ရသည်ကိုပင် သဘောကျနှစ်သက်နေမိသည်။ နိုင်ငံသားမဟုတ်သောကြောင့် အင်တာဗျူးဖြေနိုင်သည်ဟု ထင်သော်လည်း ရလိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့။
မတ်လအကုန် ဧပရယ်လဆန်းတွင် တိုင်တန်ဘေဇင်တွင် ကျင်းပသော ချယ်ရီပွဲတော်သို့သွားရောက်ကြသည်။ ကယ်ပီတယ်မှ မိုးနူးမတ်ကျောက်တိုင်၊ လင်ကွန်းမန်မိုရီယမ်အထိ နေရှင်နယ်မောလ်တလျှောက် လူများကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြပြီး အလွန်စည်ကားသည်။ ဂျပန်၊ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော ချယ်ရီနှစ်ပင်ကို တိုင်တန်ဘေဇင်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ယနေ့ အခါတွင် တိုင်တန်ဘေဇင် ကန်တလျှောက်၊ အနီးအနားတဝိုက် ချယ်ရီပင်များစွာ ရှိသည်။ သမ္မတကတော်မှ ချယ်ရီပင်စိုက်ပျိုး၊ ကျောက်မီးပုံးတွင် ဆီမီးထွန်းညှိကာ ချယ်ရီပွဲတော်ကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အတီးအမှုတ်အကအခုန်၊ ကလေးများကလည်း ပန်းချီလက်စွမ်းပြနိုင်သည်။ တိုင်တန်ဘေဇင်ကန်တလျှောက် အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေသည့် ချယ်ရီပင်အလှကို ကြည့်ရှုခံစားဖို့သန်းချီသောသူများ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
ရာသီဥတု အေးသောကြောင့် ချယ်ရီပွင့် နောက်ကျသည်။ အနီရောင် အဖူးလေးများသာ မြင်ရသည်။ နီပါလီနှစ်သစ်ကူး Dishan ပွဲတော်တွင် စွန်လွှတ်သည့်ဓလေ့ရှိသည့် ဆူနမ်တို့ က စွန်လွှတ်ချင်ကြသော်လည်း စွန်ဝယ်ရန် တန်းစီနေကြသည့် လူတန်းရှည်ကြီးကို မြင်လိုက်ရသည်နှင့် လက်လျှော့လိုက်ကြသည်။ စွန်လွှတ်ပြိုင်ပွဲရှိသည်။ ကလေးများက စွန်ကိုလေထဲ ပျံဝဲနေစေဖို့ပြေးလွှားဆော့ကစားကြသည်။ အင်တာဗျူးမှအပြန် ချယ်ရီများ ပွင့်ပြီလားဟု သွားချောင်းသော်လည်း အနှီချယ်ရီကား မပွင့်သေး။ ချယ်ရီများ အစွမ်းကုန်ပွင့်ချိန် ကျောင်းတွင် Seminar Course သွားတက်နေရသောကြောင့် ချယ်ရီအလှကို မတွေ့ လိုက်ရ။
ဒီစီအလုပ်အော်ဖာ ပေးလာသောအခါ ပျော်လိုက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။ အင်တာဗျူးသွားကတည်းက နှစ်သက်သဘောကျနေသည့် နေရာလေး။ ရုံးသည် ကယ်ပီတယ်နှင့် ဒီအိုအယ် (Department Of Labor) ကြားတွင် ရှိသည်။ ကလိုင်းရင့် ဒီအိုအယ်အတွက် ဆော့ဝဲပရောဂျက် ရေးပေးရသည်။ မျက်လုံးလှသည့် အင်တာဗျူးသူမှာ တက်ဒ်ဟု ခေါ်ကြသည့် သီဟိုဒိုဝိန်းရိုက်ဖြစ်သည်။ Hazel မျက်လုံးပိုင်ရှင် တက်ဒ်၏မျက်လုံးသည် အစိမ်းရောင်အင်္ကျီဝတ်သည့်နေ့ တွင် အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင်ဝတ်သည့်နေ့ တွင် အပြာရောင်၊ အညိုရောင်ဝတ်သည့်နေ့ တွင် အညိုရောင် ပြောင်းနေတတ်သည်။ တွေ့ ဖူးသမျှ မျက်လုံးအရောင်များထဲတွင် ထိုအရောင်သည် အလှဆုံးဖြစ်သည်။ တက်ဒ်တွင် ပိုလန်အလာဂျီရှိသောကြောင့် ပန်းဝတ်မှုန်များသည့်နေ့ တွင် နှာရည်တရွဲရွဲဖြစ်ကာ နှာချေနေတတ်သည်။
ဘရန်ဒန် ဟန်နာမန်းတွင် မြေပဲအလာဂျီရှိသည်။ မန်နေဂျာကင်တွင် ပိုလန်အလာဂျီရှိပြီး မျက်လုံးတစ်ခုလုံး နီရဲနေတတ်သည်။ စက်ဘီးစီး ဦးထုပ်ဆောင်း၊ အားကစားဝတ်စုံဝတ် ရုံးသို့ စက်ဘီးစီးလာတတ်သည့် လီဆာ။ မတ်ထရူးသည် Business Analyst ပီသကာ သူရှိလျှင် တရုံးလုံး သူ့ အသံများနှင့် ဆူညံနေတတ်သည်။ တန်ပါသောမတ်သည် အမျိုးသမီး System Administrator ဖြစ်ပြီး ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလေ့ရှိသည်။ Office Manager ဘာဘရာသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး တရုံးလုံးက အားထားရသူဖြစ်သည်။ ရုံး၏ သက်တော်ရှည်မှာ Customer Service Desk မှ ဗီယက်နမ် သက်ငုယင်ဖြစ်သည်။ ဒီအိုအယ်ရုံးထိုင်ပြီး ရုံးသို့ ကိစ္စရှိမှလာတတ်သည့် တောင်အာဖရိကတိုက် Guinea နိုင်ငံမှ အာဘူး၊ အီဂျစ်မှ အာမက်၊ အလီ။ တစ်နှစ်တွင် တစ်ခေါက်လောက်သာ တွေ့ ရတတ်သည့် စီအီးအို စတိဗ်။
စတိတ်ရောက်နေသည်မှာ နှစ်သုံးဆယ်နီးပါး ရှိနေသည့် တရုတ်မကလဲယားနှင့် သောကြာနေ့ ဆိုလျှင် တရုတ်တန်း စားသောက်ဆိုင်များဆီသို့ခြေဆန့် ကြသည်။ ယူနီယမ်စတေးရှင်းတွင် လျှော့ပင်းကြသည်။ တခါတရံ နာမည်ကြီး ဗီယက်နမ် ဖော်ဆိုင်ဖြစ်သည့် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အာလင်တန်မြို့ဖော် ၇၅ ဆိုင်သို့သွားကြသည်။ တခါတရံ ပတ်တိုးမတ်မြစ်ဘေးတလျှောက် လမ်းလျှောက်ကြပြီး ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ဆီ သွားရောက်လည်ပတ်သည်။ ပတ်တိုးမတ်စ်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ရုိုစလင်ထိ ၄ နာရီနီးပါး လမ်းလျှောက်ကြသည်။ ကလဲယားက ဒီစီသို့နောက်ထပ် ၂ နာရီ လမ်းလျှောက်ပြန်နိုင်သေးသော်လည်း ကလဲယားထက် အနှစ်၂၀ မျှ ငယ်သည့်သူက လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့သောကြောင့် ရထားစီးပြန်ခဲ့ရဖူးသည်။
ကလဲယား၏ ခေါက်၍ရသည့်စက်ဘီးကို ကယ်ပီတယ်နောက်တွင် စီးခဲ့ဖူးသည်။ သောကြာနေ့ ညနေစောင်းတွင် ကယ်ပီတယ်မှ နေရှင်နယ်မောလ်တလျှောက် တွေ့ မြင်သမျှ ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိသည်။ တိုင်တန်ဘေစင်ကန် တပတ်လျှောက်သည်။ နေရှင်နယ်အာခိုက်ပြတိုက်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာ မူရင်းစာတမ်းရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ခန့် က စာရေးမူများကို တွေ့ မြင်ရသောအခါ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းကို မချီးမွမ်းဘဲ မနေနိုင်။ ထိုပြတိုက်သည် ကင်မရာရိုက်ခွင့်မပြုသလို ရှေးလက်ရေးမူများ တာရှည်ခံစေရန် အခန်းတိုင်းသည် အနည်းငယ်မှောင်ပြီး အနည်းငယ်အေးမြသည်။ အမျိုးသားဂယ်လာရီပြတိုက်တွင် ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ ဗီရိုများကို တွေ့ နိုင်သည်။ အလင်း၊ အမှောင် ပိုင်နိုင်လွန်း၊ ရုပ်လုံးကြွပြောင်မြောက်သည့် ပန်းချီကားများကို မှင်တက်မိသွားဖူးသည်။
ကက်သလစ်ယူနီဗာစတီအော့ဖ် အမေရိကားဘေးတွင်ရှိသော ဘက်စီလီကာအမျိုးသား ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အဆောက်အဦးသည် လက်ရောက်ပြောင်မြောက်လွန်းသည်။ လူဖြူလူမည်း ခွဲခြားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့်ရအောင် လမ်းပွင့်စေခဲ့သည့် မာတင်လူသာကင်း၏ သမိုင်းဝင် I haveadream မိန့် ခွန်းပြောကြားသည့် ဝါရှင်တန်ချီတက်ပွဲကို အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပသည်။ အိမ်ဖြူတော်နောက်ဖက်တွင် ဆိုင်းပုဒ်ကိုင်ဆန္ဒပြသူများကို အမြဲလိုလိုတွေ့ နိုင်သည်။ ပန်းရောင်စုံများ၊ ရေပန်းများဖြင့် တင့်တယ်လှပ သန့် ရှင်းသည်။ ထိုမြို့ လေးတွင် ဝါသနာတူသူများ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည့် အသင်းအဖွဲ့ များရှိသည်။ ကယ်ပီတယ်ဟိုက်ကင်းကလပ်ဖြင့် ရှယ်နယ်ဒိုးဝါးတောင် တက်ဖူးသည်။ မတူကွဲပြားသည့် အစားအသောက်မျိုးစုံကို မြည်းစမ်းနိုင်သည်။
အစိုးရဘတ်ဂျက် ဖြတ်သောကြောင့် ပြတိုက်စောစောပိတ်သည်။ လိုင်ဘရီအော့ဖ် ကွန်ဂရက်၊ ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းသို့ထပ်မံသွားရောက် လည်ပတ်သည်။ နွေဦးနှင့်နွေရာသီတွင် သစ်ပင်များ စိမ်းလန်းဝေဆာပြီး ဆောင်းဦးရာသီတွင် သစ်ရွက်များ အဝါရောင်၊ အနီရောင်ပြောင်းကာ အလွန်လှပသည်။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ ရှပ်ဒေါင်းချိန် ကယ်ပီတယ်တွင် သတင်းထောက်များ ဝိုင်းအုံနေသည်။ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်တိုင်အေင် ရီဘာပလင်ကန်နှင့် ဒီမိုဂရက် အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေသောကြောင့် ကယ်ပီတယ်သည် မီးထိန်ထိန်လင်းနေသည်။
ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ ရှပ်ဒေါင်းစဉ် ရှပ်ဒေါင်းလိုက်သောရုံးသည် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ ပြန်ဖွင့်သော်လည်း ပြန်ဖွင့်မလာတော့။ ဒီအိုအယ်နှင့် ကွန်းထရပ် မတိုးမှန်း သိနှင့်နေသောကြောင့် လေးအော့ဖ်ဖြစ်သည့်အခါ ထူးထူးထွေထွေ မခံစားမိ။ စောင့်ရှောက်ကူညီ သွန်သင်ဆုံးမတတ်ရုံမက ပြည်နယ်သုံးခု၊ မြစ်နှစ်ခုဆုံသည့် ဟာပါးဖယ်ရီရောက်ဖူးအောင် ပို့ ဆောင်ပေးသည့် ကလဲရားလို မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ထိုရုံးလေးမှ ရရှိခဲ့သည်။
အလုပ်သစ်ရှာဖွေချိန် ထိုမြို့ လေးသို့မရောက်ဖြစ်။ သို့ သော် တီဗွီဖန်သားပြင်တွင် ထိုမြို့ လေးအကြောင်း အမြဲလိုလို တွေ့ နေရတတ်သည်။ ထို့ မြို့ လေးကို နှစ်သက်သောကြောင့် မေရီလန်းတွင် အလုပ်ရချင်သော်လည်း အလုပ်အော်ဖာ ပေးလာသောမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ ရဖို့ဖန်လာပြန်သည်။ ဘုရင်နေသောမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ စဉ် ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိသလို ဆူနမ်တို့ ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လာချိန်တွင်လည်း စိတ်ချက်လက်ချ အေးအေးဆေးဆေး ရှိနေခဲ့သည်။ သို့ သော် ယခုပြောင်းရွှေ့ ရမည့်မြို့ သည် တခြားမြိူ့များနှင့် ကွာခြားလွန်းသောကြောင့် စိတ်အေးလက်အေး ရှိမနေခဲ့။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ထိုမြို့ လေးသို့သွားရောက်လည်ပတ်သောအခါ ဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် သစ်ပင်များ မည်းမည်းခြောက်ခြောက် ဖြစ်နေသော်လည်း ထိုမြို့ လေးအလှ နည်းနည်းလေးမှ မယွင်းခဲ့။
အစိုးရရုံးစိုက်ရာမြို့ ဖြစ်သော ထိုမြို့ လေးတွင် မိုးမျှော်တိုက်များမရှိ။ ရှေးဟောင်းလက်ရာ အဆောက်အဦးများဖြင့် လှပခန့် ညားသည်။ ထိုမြို့ လေးတွေင် သမ္မတနေထိုင်သည့် အိမ်ဖြူတော်ရှိသည်။ အရေးကြီးသည့် ဥပေဒများ တင်သွင်းငြင်းခုန် အတည်ပြုကြသည့် ဆီးနိတ်နှင့်ဟောက်စ်ရှိရာ အမိုးခုံးဖြူဖြူလှပခန့် ညားသည့် ကယ်ပီတယ်ရှိသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပသည့် ဘုရားကျောင်းများ ရှိသည်။ မြို့ တော်ကို ဖြတ်သန်းပြေးဆွဲသည့် သန့် ရှင်းစနစ်ကျသည့် မီးရထားစနစ်ရှိသည်။ ပြတိုက်တော်တော်များများသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးပေးရသည့် စပိုင်ပြတိုက်၊ မော့က်ဗာနွန်တို့ ကို သွားမလည်ဖြစ်ခဲ့။ ထိုမြို့ လေးတွင် လည်ပတ်စရာများ မကုန်ခန်းနုိုင်အောင် ရှိသည်။
ခြင်္သေ့ကျွှန်းကို လာစဉ်တုန်းက မျက်ရည်တစက်မှ မကျခဲ့။ သို့ သော် ယူအက်စ်ကိုလာစဉ် ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှ ဟောင်ကောင်အထိ ငိုကြွေးနေခဲ့ဖူးသည်။ ဟောင်ကောင်မှ ချီကာဂိုခရီးစဉ်တွင် မျက်ရည်တိတ်သွားသည်မှာ ကြီးမားသည့်ဘိုးအင်း ၇၄၇ လေယာဉ်ကို စူးစမ်းချင်စိတ်၊ လူတွေအများကြီးရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒုတိယအကြိမ် ငိုကြွေးရသည်ကတော့ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ကျောင်းကထွက်ခွာသွားစဉ်တုန်းက။ ချစ်သူရဲ့ မြို့ က ထွက်ခွာလာခဲ့စဉ် မငိုကြွေးခဲ့။ တတိယအကြိမ် ငိုရသည်ကတော့ ယူအက်စ်တွင် ပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည့် ကန်တက်ကီရုံး နောက်ဆုံးနေ့ ။ ဘုရင်နေသောမြို့ မှ ထွက်ခွာလာခဲ့စဉ် မငိုကြွေးခဲ့။ ရင်နာနာဖြင့် ငိုကြွေးရလွန်း၍ မျက်ရည်များ ကုန်ခမ်းသွားပြီလား၊ ဘတ်စ်ကားခ သက်သာပြီး ၄ နာရီ ခွဲ ကားစီးရုံမျှဖြင့် အချိန်မရွေး ရောက်နိုင်သည်ဖြစ်သောကြာင့် ထိုမြို့ လေးမှ ထွက်ခွာစဉ် ငိုကြွေးလိမ့်မည်ဟု မထင်မိ။
ရုံးကိုလည်း မတွယ်တာ၊ နေထိုင်သည့်မြို့ ကိုလည်း မတွယ်တာဘဲ နွေဦးတွင် ချယ်ရီဝေသောမြို့ ကလေးကို တွယ်တာသည်ကတော့ ထူးဆန်းလှသည်။ ထိုမြို့ လေးတွင် ဝင်ကြေးအခမဲ့ ပြတိုက်များစွာ ရှိသည်။ မြို့ လေးတခွင် စက်ဘီးနှင့် လှည့်လည်နိုင်သည်။ ပတ်တိုးမတ်မြစ်ကမ်းဘေးတလျှောက် စက်ဘီးစီး၊ အပြေးလေ့ကျင့်၊ လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ပတ်တိုးမြစ်တလျှောက် သင်္ဘောစီးကာ မြို့ အလှကို ခံစားနိုင်သည်။ မြစ်ထဲတွင် ကနူးလှေလှော်၊ Rafting လုပ်နိုင်သည်။ အနီးအနားရှိ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊ မေရီလန်းပြည်နယ်ဖက်ရှိ တောင်များကို တက်နိုင်သည်။ အမျိုးသားဥယျာဉ်များစွာ ရှိသည်။ အစားအသောက်မျိုးစုံ မြည်းစမ်းနိုင်သည်။ အနုပညာ၊ ပြဇာတ်ပွဲများ ရှိသည်။ လျှော့ပင်းမောလ်များစွာ ရှိသည်။ ထိုမြို့ လေးတွင် လေ့လာစူးစမ်းချင်စိတ်၊ အံ့သြမူများ၊ ဆွဲငင်မှုများနှင့် ဖမ်းစားလွန်းလှသည်။
မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများ၊ ရထားများ၊ လူများ အလွန်ရှုပ်၊ တက်သုတ်နှင်၊ ခံစားချက်မဲ့ မျက်နှာသေများ၊ နှုတ်ခွန်းမဆက် ညမအိပ်သည့် ကွန်ကရစ်ဂျမ်းဂဲမြို့ တွင် မောပန်းနွမ်းနယ်၊ စိတ်နှလုံး ညစ်နွမ်းလာခဲ့လျှင် ပတ်တိုးမြစ်ပေါ် ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသည့် လတ်ဆတ်သော လေပြည်လေညင်းကို ရှုရှိုက်ဖို့ ၊ နွေဦးတွင် ချယ်ရီဝေသောတစ်နေ့ချယ်ရီမြို့ လေး၏ရင်ခွင်ဆီ မှေးစက်အနားယူဖို့ပြန်ခဲ့ဦးမည် ထင်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၆ ၊ ၂၀၁၃။
သတင်းတွင် အမြဲပါသည့် ချယ်ရီမြို့ လေးမှ ထွက်ခွာသောနေ့အမှတ်တရ
ရေးခဲ့ဖူးတဲ့မြို့ တွေ
ချစ်သူရဲ့ မြို့ 
ဘုရင်နေသောမြို့ 
P.S ဒီစီသွားတောလား၊ All About DC စီးရီးပို့ စ်ကနေ ဒီစီရဲ့ အထင်ကရ နေရာတွေကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဆောင်းရာသီ သစ်ပင်မှာ သစ်ရွက်တွေ မရှိတော့တဲ့အချိန်မို့မြင်ကွင်းရှင်းနေတယ်။ သွားလည်ခဲ့သမျှထဲမှာ ဒီတခေါက်က လူအရှင်းဆုံး။ ကိုယ့်နောက်ဆုံးအခေါက်ပေမဲ့ ဇာရာ့ ရဲ့ပထမဆုံးအခေါက်။ တယောက်တည်း တိုးရစ်တာများတာမို့ဒီတခေါက်မှ ဇာရာ့ကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တော့တယ်။ ဒီနေ့စတိတ်ရှိုးတွေနဲ့ကယ်ပီတယ်ရှေ့ က ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို မီးစထွန်းညှိတယ်လို့သတင်းမှာ တွေ့ လိုက်တယ်။ ဒီစီရဲ့ ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ်ကူးချိန် ညအလှတွေကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖူးသေးဘူး။ တစ်နေ့ နေ့ ပေါ့။